महालेखाले के गर्छ भनेर जनता मर्न दिनु त भएन नि  Sourya Online
महालेखाले के गर्छ भनेर जनता मर्न दिनु त भएन नि
सौर्य अनलाइन २०७५ साउन २३ गते १०:२६ मा प्रकाशित
गोविन्द खडका, अध्यक्ष, लिखु–तामाकोसी गाउँपालिका रामेछाप
रामेछापको लिखु–तामाकोसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोबिन्द खडका जतिवेला पनि जनताकै समस्या समाधानमा केन्द्रित भइरहने जनप्रतिनिधि हुन् । तत्कालीन नेकपा एमालेबाट उम्मेदवार बनी भारी मतका साथ अध्यक्षमा निर्वाचित भएका खड्का आफ्नो कार्यकालमा आर्थिक अनियमितता र मतदाताले मन नपराउने कुनै पनि काम नहोस् भनेर निकै सतर्क देखिँदै आएका छन् । प्रदेश सरकारले तय गरेअनुसार अध्यक्षले पाउने तलबसमेत जनताको सेवामा समर्पित गरेका खड्का जनताकै काममा व्यस्त छन् ।
आएको सबै तलब जनताको आवश्यकताअनुसार वितरण गर्दै आएको र अब पनि सोहीअनुसार गर्ने उनी बताउँछन् ।अध्यक्ष खड्काले पहिलो महिनाको तलब लिखु गाउँपालिका–१ दुरागाउँका २२ घर भूकम्पपीडितलाई, दोस्रो महिनाको तलब २ नम्बर वडा सैपुका असहायलाई र तेस्रो महिनाको तलब भने गाउँपालिका–७ तिल्पुङका सहिद परिवारलाई दिएका छन् । गाउँपालिकाको विकास, निर्वाचनको समयमा जनतासँग गरिएको प्रतिबद्धता र आगामी दिनको योजना लगायतको विषयमा केन्द्रित रही अध्यक्ष खड्कासँग सौर्यकर्मी यसिमा महतले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
निर्वाचित भएको एक वर्ष नाघ्यो, देखिने गरी के काम गर्नुभयो ?
केही समय बुझ्न लाग्यो । जनताको खास समस्याको पहिचान त पहिला नै थियो । तर, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न समय त लाग्ने नै भयो । हामी निर्वाचित भएदेखि नै जनताको सेवामा निरन्तर लागेका छौँ । हाम्रो पहिलो प्राथमिकता खानेपानी समस्या समाधानतिर गयो । एकलौटी निर्णयले ३५ लाख बराबरको पाइप बाँडिदिए । ३ नम्बर वडामा त कुनै पनि घर बाँकी छैन पानी नभएको भन्ने ।
आवश्यक विषय भएकाले सबैले असहमत गर्दैगर्दा रिक्समा काम गरेको हुँ । बाटो विस्तार हुने क्रममा किच्चिने, भाँच्चिने भएको थियो । त्यसकारण थप पाइप ल्याएको हुँ । भवन निर्माणका सामग्री ढुवानी गर्न सजिलो होस् भनी ठाउँ हेरेर कहीँ घरघरमा त कहीँ टोलटोलमा बाटो पुर्याएको छु । खानेपानीको ट्यांकी मर्मतदेखि ट्यांकी नै नयाँ ल्याएर राख्ने काम पनि भएको छ । धेरैभन्दा धेरै यो वर्षमा भनेको बाटो नै हो । लिखु–तामाकोसी गाउँपालिकाका ७ वटा वडामा नै सबै ठाउँमा सडक पुगेको छ ।
सडक मात्रै हो एक वर्षको काम ?
अरू काम पनि भएका छन् । खिम्तीमा बाढी गएपछि बाढीपीडितलाई ५० हजार नगद र १५ हजार जिन्सी गरेर राहत दिइएको छ । दलित, आर्थिक विपन्न भएकाहरूलाई पनि नगद दिएको छु । व्यक्तिगत रूपमा कसैले पनि यसमा सहयोग गरेका छैनन् । मैले २०÷३० हजार रुपैयाँ रिक्स लिएर भोलि भैपरी आएको खण्डमा आफैँ तिर्ने गरी काम गरेको छु । तर, भोलि महालेखाले के गर्छ ? थाहा छैन ।
किनभने जनता गरिब छन्, बिरामी परेका छन्, पोलिएको, जलेको छ, उसको किड्नी फेल भएको छ, अथवा खुट्टा भाँचिएको छ, हात भाँचिएको छ र आर्थिक अभावकै कारण उपचार गर्न पाएका छैनन् भने हामीले पहिल्यै बिल भर्पाई खोजेर हुँदैन भनेर कार्यकारी अधिकृत, लेखापाल सबैलाई भनेर निजी तोक लगाएर १५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छु ।
महालेखाले के गर्छ भनेर जनता मर्न दिनु त भएन नि । यो स्थानीय तहमध्ये नै पहिलो हुन्छ होला । तर, यदि महालेखाले तिरायो भने त्यो तिर्न पनि डराउँदिनँ । तिर्ने रणनीति लिएर जनताको सेवा गरिरहेको छु । महालेखाले तिराउने जनतालाई हो । तर, म जनतालाई तिराउँदिनँ, आफैँ तिर्छु ।
यस अतिरिक्त खानेपानी समस्या समाधान गर्न सवै वडामा पाइप पुर्याइएको छ । पाइप वितरण गर्ने समयमा ३, ४ र ५ वडामा बढी गएको छ । तर, कुनै पनि ठाउँमा अब लगभग नपुग छैन । खण्डन पनि गरिरहेका छन् तर मेरो भिजन नै पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजुलीको विकास गर्नु थियो ।
आफू प्रमुख भएर भूमिका निभाउँदा र बाहिर बसेको समयमा सहयोग गर्दा के कस्ता अप्ठ्यारा आइपरे ?
मेरो टिम मिलेको भए धेरै काम गरिसकिन्थ्यो । जिल्लाको अन्य गाउँपालिकामा कति बजेट फ्रिज भएर पनि गएको छ तर मैले काम गरेँ, फ्रिज हुन दिइनँ । पालिकाको बैठकमा टिम भएर आउने, अनि बहिष्कार गर्ने उपाध्यक्षका कारण काम गर्न अप्ठेरो आइपरेको छ । मेरो लक्ष्य नागरिकता, विवाह दर्ता, मृत्यु दर्ता जस्तो बनाउने क्रममा एउटा नागरिकले पाउने हकअधिकारको कुरामा कर नलिउँ, छुट दिउँ भन्ने थियो ।
त्यही प्रस्ताव राखेँ । तर, अहिले उपाध्यक्ष राजस्वको संयोजक भएको हिसाबले यी विषयलाई पनि कर दिनुपर्छ भन्नुभयो । बरु अन्य व्यवसायबाट जस्तो क्रसर उद्योगबाट, दुई वटा हाइड्रो छ, त्यसलाई अलि टाइट गरेर कर बढी लिने गरौँ । एकमुष्ठ गाउँपालिकामा राजस्व बुझाउन लगाउने, ठेक्कापट्टामा पनि बढी राजस्व लिने गर्दा नै राम्रो हुन्छ भनेको थिएँ । सर्वसाधारण जनतालाई सामान्य काममा लिन हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो ।
एउटा सुकुम्बासी जनताले सार्वजनिक ठाउँमा टहरो बनाएर बस्यो, त्यसलाई पनि कर लिउँ भन्या छन् तर म त्यो कुरामा सहमत हुन्न भनेको थिए । यस्तो कुरामा मलाई दुःख लागेको छ तर बाध्य भएर साइन गरेको छु । तर, सुकुम्बासी एउटा टहरो बनाएर बसेको छ, उसँग के हुन्छ र उसँग कर लिनु हुन्छ त्यो हुँदैन । मेरो भिजन भनेको जनतालाई नै सेवा गर्नु हो । गाउँपालिकाको ७ वटै वडामा बाटोको ट्याग ओपन भएको छ।
अब नयाँ ट्याग ओपन गर्न बाँकी कहीँ पनि छैन । ९५ प्रतिशत ट्याग ओपन भइसकेको छ पाँच प्रतिशत मात्रै बाँकी छ । मैले जनतालाई अहिलेको २१औँ शताब्दिमा पनि १८औँ शताब्दीजस्तो हामी अन्धकारमा रहनुपरेको मेरो लिखु उज्यालो बनाउँछु भन्ने घोषणा गरेको थिएँ । मेरो प्रमुख भिजन पनि त्यही हो । चुनावको वेलामा पनि ठाउँठाउँमा भाषणकै क्रममा पनि रेकर्ड नै गरेर राख्नुस् पनि भनेको थिएँ ।
त्यसैले नागदहमा दुई करोडको बजेट हाल्दा पनि एक हप्तासम्म कमिटीमा रहेकाले सहमत जनाउनु भएन तर बिजुली बाल्न बाँकी सबैमा पुर्याउने लक्ष्यका कारण मैले जबर्जस्ती नै बजेट निकासा गरेको हुँ । अब कम्तीमा एक महिना र बढीमा दुई महिनामा नागदह अन्धकारबाट मुक्त हुन्छ । लिखु–४ बिजुलीकोट एक महिनाभित्रै अन्धकारबाट मुक्त हुन्छ ।
बाँकी १ र २ वडा दुरागाउँ र सैपुको लागि बजेट हाल्ने समयमा पनि व्यापक झगडा नै पर्यो। अन्तिममा सबैजना सहमत पनि हुनुभयो तर त्यसमा पनि धेरै संघर्ष गर्नुपर्यो । १ र २ वडाबाहेक दुई महिनापछि सबै वडामा बत्ती बल्छ । त्यस हिसाबले पनि साढे २ करोड ५० लाख रुपैयाँ दुरागाउँलाई बजेट छुट्याइयो ।
लिखुको हिमाली भेग विकट ठाउँ, जहाँ बिजुलीको एउटा खम्बा पनि नदेखिएको र सैपुको केही बेसी भागमा बत्ती नै बलेको ठाउँ हो त्यसैले सैपुलाई १ करोड ७५ लाख उज्यालो लिखुको भिजनमा टेकेर काम गरिएको छ । चुनावी घोषणाको मेरो पहिलो भिजन अबको दुई वर्षभित्र सबै पूरा पनि हुन्छ ।
घर–घर, टोल–टोलमा पुगेको बाटो बाटोमा नै सीमित हो कि साधन पनि जान्छ ?
कतिपय ठाउँमा साधन पनि जान्छ । तर, कति ठाउँमा खन्ने क्रममा नै बजेट नै कम्ती हुँदा नाली काट्न, त्यसलाई वाल लगाउन समस्या भयो । कुनै राम्रो खनेको बाटो पनि वर्षाका कारण समस्या आएको छ । त्यसले गर्दा जानै नसकिने होइन कतिपय ठाउँमा सजिलै जान सकिन्छ त कतिपयमा मुस्किलले सकिन्छ तर जानै नसकिने भन्ने होइन । कतिपय ठाउँमा अहिले वर्षामा पनि घरघरमा ट्रयाक्टर गइरहेको छ ।
चुनावको समयमा जनतासँग गरेका प्रतिवद्धता कसरी पूरा हुन्छ ?
मैले चुनवाको समयमा म जितेर तलब खानका लागि होइन, सेवाका लागि आएको हुँ भनेको थिएँ । मेरो तलब असहाय, अशक्त, वृद्धवृद्धाको सेवामा र गरिब बालबालिकाको शिक्षामा खर्च गर्छु भनेको थिएँ । त्यो पूरा गर्छु र गर्दै पनि आएको छु । मैले पाउने तलब म एक रुपैयाँ पनि लिने छैन । म पाँच वर्षकै तलब गरिबको रेखामुनि रहेका, अशक्त र असहायका लागि खर्च गर्नेछु ।
यो घोषणा मैले गरिसकेको छु, त्यसबाहेक गाउँपालिकाको विकास र समृद्धिको लागि रातदिन नभनी काम गर्छु । गाउँपालिकाभित्र निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनामा अनिवार्य रूपमा सेयर हाल्ने व्यवस्था गर्नेछु । मैले मेरो कार्यकालभित्र गाउँपालिकाका युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान नपर्ने गरी रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्छु ।
गाउँपालिकाभित्रको उर्वरभूमिलाई आधुनिक खेती गर्न प्रोत्साहित गर्ने योजना अगाडि सरेको छु । पाँच वर्षको अवधिमा गाउँपालिकामा अस्पताल, एउटा कृषि क्याम्पस लगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारेका छौँ । प्रतिबद्धता अनुसार नै काम गरिरहेको छु, जनताले महसुस गर्ने गरी कामै गरेर देखाउँछौँ ।
एक वर्षको समयमा जनतालाई केके सेवा दिनुभयो ?
एक वर्षमा हामीले धेरै काम गर्यौ । जुन बजेट आयो त्यो कम नै थियो त्यसैले बजेटअनुसार नै काम गर्ने हो । नमुना काम भनेको वडा ४ अन्धकारबाट मुक्त हुन हो । एक÷दुई महिनामा नै दुई वडा बाहेक सबैमा बिजुली हुन्छ । खानेपानीको पाइप, ट्यांकी, गरिब, दलित, विपन्न परिवारको व्यक्ति बिरामी छ र त्यसले उपचार गर्नका लागि अस्पतालसम्म जान पनि नसक्ने छ भने अवस्था हेरेर १५ लाखको हाराहारीमा गाउँपालिकाबाट आर्थिक सहयोग गर्यौँ ।
त्यससँगै अवस्था हेरेर व्यक्तिगत रकम पनि दिँदै आएको छु यो मेरो जनताको सेवा हो । यी र यस्ता कामहरू स्थानीय तहमध्येकै राम्रो काम हो कुनै ठाउँमा पनि पैसा बाँडेका छैनन् । पालिकाका अन्य सदस्यहरू असहमत हुँदाहुँदै पनि धेरै कामहरू गरेको छु । यदि यो रकमहरू व्यक्तिगत तिर्न परे पनि पछि पर्दिनँ मलाई जनताले राम्रो काम गर्न पठाएका हुन् ।
निःशुल्क सेवा दिने भनेर भर्खरै दुई वटा एम्बुलेन्स ल्याउनुभएको छ नि ?
स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुरा गर्दा म आफैँ ठाउँठाउँमा गएर छड्के हिसाबले स्वास्थ्य चेकअप गरँे तर त्यहाँ जनताले निःशुल्क पाउने औषधि पनि अफिस समयभन्दा अन्य समय भए त्यहि औषधि किन्नुपर्ने अवस्था रहेछ अब त्यसको अन्त्य भएको छ । कतिपय बिरामीलाई आफैँ तोक लगाएर धेरैपटक औषधि किनिदिएँ । धेरै बिरामीलाई सहयोग गरेँ त्यसमा मेरो १० लाख व्यक्तिगत पैसा पर्यो तर त्यसका लागि एम्बुलेन्स वा गाडीको बिल ल्याएपछि मात्रै मैले पैसा दिएँ ।
गाउँपालिकामा एम्बुलेन्स नहुँदा जनतालाई धेरै समस्या थियो । तर, गाउँपालिकावासीले मलाई भन्नुभएको थियो भन्नेले समस्या खेप्नुपरेन । यदि, मलाई उहाँहरूले भन्नु भएन र आफैँ गुपचुप राख्नुभयो भने त आफैँ जान्नु हुन्छ, त्यसबाहेक मलाई भनेर मैले गाउँपालिकाको रकम बाहेक व्यक्तिगत रूपमा रकम दिएको छु । मैले रातको १२ बजे पनि नभनी थाहा पाएसम्म आफूले गाडी पठाएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ गाडी भाडा, एम्बुलेन्स भाडा तिरेको छु यो मेरो नमुना काम हो ।
७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये तपाईं एक हो त्यसैले अन्य ७ सय ५२ प्रमुखलाई के भन्न चाहानुहुन्छ ?
हाल गाउँपालिकाको घर छैन भाडामा छौँ । सरकारले दिएको नम्स अनुसार अब भवन बनाउँछौँ । त्यसपछि १५ शय्याका अस्पताल जसरी पनि बनाउँछौँ । शिक्षा क्षेत्रमा विशेष रूपमा काम गर्न जरुरी छ । तीन वर्षदेखिका बच्चालाई स्कुल हालिएको छ । उसले खाली गोडाले पैदल हिँडेको छ त्यो मेरो आँखाले देखेको कुरा हो यसका लागि म गाडीको व्यवस्था गर्ने योजनामा छु ।
शिक्षकले खाजा खाएको समयमा विद्यार्थीलाई पनि भोक लाग्छ त्यसैले तिनलाई पनि खाजा खाने वातावरण बनाउन पहल गर्छु । शिक्षा क्षेत्र विकासका लागि राम्रो अवधारणा ल्याउनेछौँ । गरिबको एक छोरा पानीमा स्कुल जाँदा पानीमा नै भिज्ने, घाम लाग्दा घाममा सेक्किने गरेका छन् । बिहानदेखि काम गर्दा घरमा खाना पाकेको समयमा त खाएर नै जान्छ तर नपाकेको समयमा भोकै पनि गएको हुन्छ दिउँसोको लागि भनेर राजधानीलगायत विकसित ठाउँमा पो ब्रेक टाइम भनिन्छ तर त्यहाँ त केही पनि छैन ।
पैदल हिँड्ने बालबालिकाहरूलाई बसको व्यवस्थापन गरेर ल्याउने, लाने र अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइ सुरु गर्नेछौँ । अहिले अंग्रेजी नजानेको पीडा मलगायत म जस्ता अन्य स्थानीय तहका प्रमुखले भोग्नुपरेको छ । अहिले फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जाल चलाउन हामीलाई नै आउँदैन । त्यो भनेको अंग्रेजी शिक्षा राम्रो नभएकै कारण हो । अंग्रेजी माध्यमलाई बढी प्राथमिकता दिएर त्यसमा बढी बजेट छुट्याएर काम गर्नेछौँ ।
स्वास्थ्यमा भएको लापरबाही इन्चार्जहरू आफ्नो डिउटी मात्रै पूरा गर्ने अफिस समयभन्दा पछि आएको बिरामीहरूलाई स्वास्थ्य सेवा नदिने र औषधि पनि यो किन्नुपर्छ भनेर बेच्ने, एउटा सुई लगाएको पनि तीन हजारसम्म लिएको थाहा पाइयो अब यसको अन्त्य भएको छ । आफ्नै कार्यकालभित्र कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्री कोषमा होस् चाहे जहाँ लडेर भए पनि १५ शय्याको अस्पताल बनाउँछु ।
एक करोड हामीले हाल्यौँ भने बाँकी सरकारले नै गर्ने भनेर राखेका छौँ । त्यो रकम कि त गाउँपालिकाको भवन बनाउनेमा खर्च गर्छौं कि त अस्पताल बनाउनका लागि लगानी गर्छु । जुन कुरालाई पनि चासो राखिएन र भाषण मात्र गरियो भने त्यो भाषण, बोलीमा नै सीमित हुन्छ । कल्पना गरेर कल्पनामा नै बित्न दिन हुँदैन त्यसैले कुराभन्दा बढी काम गर्नुपर्छ म त्यो गर्छु ।
तर, काम गर्ने मानिसलाई नै बढी आरोप प्रत्यारोपका चाङहरू आउने गर्छ यो मैले भोगेको कुरा हो । जनताको सेवाका लागि एम्बुलेन्स खरिद गर्ने पक्रियामा नै पनि धेरै दुःख भयो । दुई महिना सुनौली भन्सारमा रह्यो, अर्थमन्त्रालयबाट कर तिर्नुपर्छ भनेर भनेको थियो । तर, गाउँपालिकाले एम्बुलेन्स खरिद गर्दा कर दिनुपर्छ भन्ने नियम नभएका कारण मैले कर तिर्न मानिनँ यदि त्यो नीति थियो त बाध्य भएर तिर्ने थिए ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सचिवस्तरीय मिटिङगरेर एम्बुलेन्स ल्याउने भनि चेक काटेको कुरामा मैले धेरै दुःख भोग्नुपर्यो गाह्रो भयो । गाउँपालिकामा पनि सुगम र दुर्गम दुबै ठाउँ छ त्यसैले सुगममा भन्दा बढी दुर्गम भेगलाई मध्यनजर गरेर अहिले गाउँपालिकाको कार्यालय भएकै स्थानमा एम्बुलेन्स राखिएको छ । यस्ता विकासका कामले गर्दा कतिपय साथीहरू रुष्ट हुनुभएको छ तर म काम गर्न छाड्दिनँ ।
सबैले देखिने काम समान रूपले गर्नुपर्ने भएकाले म कुनै पनि योजनामा पुगैकै हुन्छु । गाउँपालिकाकै उपाध्यक्षले जस्तोसुकै कुरामा पनि साइन गर्ने गर्नुभएको छ तर मैले आरोप लगाउन खोजेको होइन । हामीले पढेर बुझेर हेरेर मात्रै साइन गर्नुपर्छ । एउटा २० लाखको योजना छ सबैले साइन गरेको आएको कुरामा सदर गर्ने हो तर त्यो कुरामा उहाँहरूसँगको मिलेमतोमा त्यस्तो काम भयो अबको दिनमा त्यो योजना भएको हो कि होइन करेक्सन गरेर मात्रै भुक्तानी दिन्छु ।
जुनसुकै कामको पनि फिल्डमा गएर आफैँ हेरेर मूल्यांकन गरेर मात्रै पैसा दिन्छु यस्तो हुँदा भ्रष्टाचार हुन पाउँदैन पछि यो उदाहरणीय काम हुन सक्छ । २० लाखको काम गरे भनेर कागज आउँछ उपाध्यक्ष त्यो काम नहेरी साइन गर्नुहुन्छ तर मैले फिल्डमा गएर अनुगमन गरे त्यहाँ १० लाखको पनि भएको थिएन । त्यसैले यो राष्ट्रको पैसा हो, यत्तिकै त १० लाख नि दिदैनौँ यति नि काम भएको छैन भन्दा उपाध्यक्षले साइन गरिसकेको कुरा भनेर झगडा गरे त्यसपछि धेरै लफडासमेत भयो ।
इन्जिनियरले सबै काम हुँदा १८ लाख बराबरको बिल पेस गरेका कारण १५ लाख दिन बाध्य भयौँ । तर, म फिल्डमा गएर नै हेरेपछि मात्रै रकम भुक्तानी गर्छु यो गर्दा राज्यलाई फाइदा र विकास दुबै हुन्छ । धेरै पैसा आउनुभन्दा पनि आएको पैसाको सदुपयोग भएन भने मेयरले होस, पालिका अध्यक्षले होस् नहेरीकिन साइन गरेर पैसा भुक्तानी गर्छ भने त्यहाँ भ्रष्टचार भएकै हुन्छ ।
विभिन्न आरोपप्रत्यारोप आइरहेका छन् र उपाध्यक्ष पनि मिल्नुभएको छैन काम गर्न कत्तिको गाह्रो छ ?
होइन गाह्रो अप्ठ्यारो आखिर नियम, ऐन, कानुनले गरेको काम नगरी हुँदैन । जे काम पनि छलफलबाट निष्कर्ष निकालेर गर्ने हो । नहुने कुरामा म कुनै पनि हालतमा मान्दिनँ । यसवर्षदेखि कुनै पनि योजनामा एक लाखकै किन नहोस् म त्यो फिल्डमा पुगेकै हुन्छु । आँखा चिम्लेर साइन गर्दा एउटा समिति त धनी हुन्छ होला तर त्यहाँ जनताको विकास त हुँदैन नि ।
त्यहाँ अलिकति भने पनि भ्रष्ट त भयो नि । उहाँहरू खुसी हुनुहोला तर जनता रुष्ट हुन्छन् त्यसैले म राम्रो र जनताको हितको मात्रै काम गर्ने वाचा गर्दै आएको छु र अहिले पनि त्यहि गर्छु । शिक्षा, स्वास्थ्यको संयोजकजस्तै भौतिक निर्माणको पनि संयोजक हुन्छ ।
त्यसैले भौतिक निर्माणको संयोजकलाई योजना अनुगमनमा राख्दा अस्वीकृत गर्नुभयो । बरु राजीनामा गर्छु बस्दिनँ भन्नुभयो । यसको कारण नै भ्रष्ट हो । आफ्नो मान्छे कमिटीमा सबै छन् भने बस्ने तर एक जना विपक्षी जस्तो हुँदा कमिटीमा नै नरहने अवस्था छ यसले काम गर्न अलि असहज हुन्छ ।
कानुनमा नै पाँच जना सदस्य हुनुपर्ने र उपाध्यक्ष संयोजक र त्यसमा अध्यक्ष वा प्रमुखले तोकेको दुई जना हुनुपर्ने व्यवस्था छ अब म अनिवार्य रूपमा दुई जना तोक्छु र पाँच जनाको कमिटी बन्छ । उपाध्यक्ष, दुई सदस्य, कार्यकारी अधिकृत, इन्जिनियर गरी पाँच जनाले गरेको कुरालाई अध्यक्षले हेर्ने हो ठीक छ कि छैन भनेर । गाउँपालिकामा आएको पैसालाई सदुपयोग गर्ने त्यहाँ हो ।
थोरै पैसाले पनि धेरै काम हुन्छ राम्रोसँग गर्ने हो तर काम गरेन भने अर्बाैँ रुपैयाँ आए पनि त्यो कागजपत्र मिलाउने हो सबै भ्रष्टाचार गर्ने खाने हो । काम हेरेर म पैसामा टाइट गर्छु त्यसैले पनि कतिपय साथीहरू रुष्ट हुनुहुन्छ । समिति बनाउँदा आनन्दले भुक्तानी दिएँ भने म राम्रो हुने रहेछु तर म त्यो कदापि गर्दिनँ देश र जनताको सेवा गर्ने मेरो कर्तव्य हो । हिजो जनताले खाली पेटमा मलाई विश्वास गरेर, भोट दिएर जिताउनुभएको छ अब म उहाँहरूको विश्वास तोड्दिनँ ।
विवाद खप्न तयार छु, तर काम नभएको कुरामा रकम दिन तयार हुन्न यो मेरो वचन भयो । अन्त्यमा वडा सदस्यदेखि वडाध्यक्ष हुँदै गाउँपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, मान्य मन्त्री सबैले जसरी हिजो हामीले जनतामा जुन मेन्डेट आफ्नो एजेन्डा लिएर गएका थियौँ । त्यहि एजेन्डामा विश्वास गरेर जनताले भोट हालेका छन् ती जनताका माग र भोटलाई भुल्न हुँदैन । तिनलाई सम्झेर अझ धेरै काम गर्नुपर्छ भन्ने ठम्याइ छ र मेरो कार्यकाल अवधिभर म त्यहि नै गर्छु ।
भेनेजुएलाको विषयले पाठ सिकाएको छ
देखिने कामको थालनी अब हुँदै छ
कांग्रेस बलियो बनाउन महाधिवेशनको विकल्प छैन
‘स्वास्थ्य क्षेत्रका कतिपय काम विश्वका लागि उदाहरणीय छन्’
कामको बोझले चुनौतीे थपिएको छ